FAQs - Shenzhen Khazimla Technology Co., Ltd.
LCD vs Direct View LED zeVidiyo Iindonga: Oko Ekufuneka Uzazi
Ukuba emarikeni yesistim nokuthelekelela, wena mhlawumbi wafumanisa ukuba ubonisa yokuzonwabisa eludongeni kuza kuluhlu ntlaninge iimilo, ubukhulu, kunye technologies. Usenokuba kwakhona uye waphawula ukuba abenzi abaninzi basebenzisa amagama ahlukeneyo iiteknoloji efanayo benze amabango ezingquzulanayo malunga apho iteknoloji yenza kakuhle.
Kuyaqondakala, oku ukudala nokudideka kubathengi. Kuba abantu abaninzi, omnye umbono othile ukudideka umahluko phakathi kweentlobo ezimbini ukubonisa ethandwayo: "LCD" (maxa wambi ebizwa ngokuba "LED-LCD") kunye 'LED "(maxa wambi ebizwa ngokuba" Direct View LED "). Nangona ukuze afane, LCD kunye Direct View LED kukho ubugcisa ezimbini uboniso nezohlukeneyo iimpawu zabo ezizodwa kunye nezibonelelo. Ngoko ke, yintoni na ezo iinzuzo? Zahlukene njani? Ukuba kunzima ukuphendula loo mibuzo, sihlale apha ukunceda!
LCD (wamanzi akhazimlayo) is a flat panel uhlobo lokuboniswa ethe ithandwa iminyaka kuzo zombini udonga ividiyo kunye neeletroniki iimarike. Enokwenzeka, ukuba sele usebenzise ubugcisa LCD izihlandlo ezininzi ngosuku - ukuba uhlobo lokuboniswa ezisetyenziswa Smartphones ezininzi, esweni ikhompyutha, kunye komabonakude.
iiphaneli LCD iqanjwa umaleko uboniso olunombala wamanzi engena phakathi ezibini yeglasi ngamaza. uboniso olunombala wamanzi lulwelo aqukuqela ngathi ulwelo kodwa iimolekyuli aokusetyenziswa ezijolise ezifana kwakheka. Xa umsinga wombane lusetyenziswa ziikristale ulwelo, le ziikristale shift, sivumele ukukhanya ndicande kuni ukuya ukudala umfanekiso. ziikristale ulwelo musa ukuvelisa ukukhanya kwabo, ngoko backlights zicwangciswe emva iglasi kukhanyisa umboniso. LED (ilight-esikhupha) zezona hlobo luqhelekileyo ilayithi esetyenziswayo namhlanje, yaye abanye abenzi lokwazisa LCD zabo LED-backlit njenge "LED-LCD."
Izinto eziluncedo ze LCD
LCD igqamile, ezifikelelekayo, zithembekile, kwaye zinika intsebenzo olubonakalayo elihle. LCD yi iteknoloji kakhulu eliphezulu-resolution, ngoko LCD ivideo iindonga unako ukubonisa okubhaliweyo, imifanekiso, kunye neevidiyo iinkcukacha elibukhali. Ezi eziluncedo yenza LCD kukho olukhulu uluhlu izicelo yevidiyo eludongeni, ukususela kumagumbi ulawulo yomkhosi kumaziko ophando eyunivesithi.
Xa LCD ukuba magumbi kunye ukudala udonga ividiyo, bezels (okanye ezivuzayo) zibonakala phakathi panels ngamnye. Oku kunokubonwa engxakini xa bethelekisa LCD kwiindidi ukubonisa seamless ezifana Direct View LED. Nakuba kunjalo, abenzi sibenza bezel-ububanzi kunye isizukulwana zonke esitsha lemiboniso, ngoko ke uya kufumanisa ukuba bezels kwi LCD ezintsha zibe lula kakhulu.
Kanye LCD, Direct View LED (ngamanye amaxesha nje ngokuba "LED") yi tyaba-panel uhlobo lokuboniswa equka ukusetyenziswa ilight-esikhupha (LED). Noko ke, Direct View LED isebenza ngokwahlukileyo kakhulu LCD. Xa View ngqo LED umboniso, amakhulu LED ezincinane zifakwe ngqo kwi lenjongo, kwaye akukho uboniso olunombala wamanzi okanye iglasi namaza iyasetyenziswa. Kunokuba ibe lelo (ezifana besenza imiboniso LCD), i-LED e Direct View LED imiboniso uvelise imifanekiso ngokwabo. LED nganye ngokwesiseko ibhalbhu ezincinane nekhupha ukukhanya webala xa ombane oluthile isicelo kuyo. Izihloko ze-LED ebomvu, eluhlaza, nemsi zihlelwe kwiqela lenjongo, ukudala pixels ngokupheleleyo-umbala afunekayo ukuvelisa umfanekiso.
Direct View LED yake-isisombululo osezantsi uboniso uhlobo esetyenziswa ikakhulu ibonisa ezinkulu ngaphandle, kodwa ke uphuhliso LED ezincinane kwiminyaka yakutshanje baye benza izigqibo eziphezulu kakhulu kunokwenzeka. Ezi inkqubela kutshanje wenza Direct View LED ukhetho olutsha umdla iidonga yokuzonwabisa endlwini.
Izinto eziluncedo ze LED
View ngqo LED panels akukho bezels, ukuze zibe magumbi kunye ukuze ibe ngokupheleleyo udonga ividiyo ngokwamacebo . Azibonisayo LED nabo eliqaqambileyo kakhulu, oluthembekileyo, amandla ombane kancinci, kwaye ukutyeba umbala ukuchaneka uvuselela amazinga naluphi na uhlobo uboniso ezikhoyo namhlanje. Ezi mpawu zenza Direct View LED ukukhetha elisemagqabini omkhulu imiqondiso yedijithali kunye nezinye izicelo ezidinga ebonwayo-ezinefuthe eliphezulu.
Nangona amaxabiso kulindeleke ukuba yehle kule minyaka izayo, ngaphezulu-isisombululo LED iindonga njengangoku izihlandlo eziliqela ibiza ngaphezu LCD, ngoko obu bugcisa isekhona ngumnqantsa abathengi abaninzi. Ukongeza, nkqu-isisombululo liphezulu LED imiboniso ngeke akwazi ukunika izisombululo ultra-high ziyafumaneka kwi LCD. Ngokuba ukusetyenziswa-iimeko ezifuna ingqalelo iinkcukacha zintle, imiboniso LCD basenokuba nanyana.
Siyathemba siye sanceda ziyasikhanyisela umahluko - kunye neenzuzo aqhelekileyo - of LCD kunye neendonga yokuzonwabisa Direct View LED. Ekugqibeleni, bobabini ubugcisa ukubonisa kakhulu, yaye kuphela isicelo sakho ethile kunye lwabiwo ukujonga ukhetho engcono kuwe.